Yakanakisa iPhone pamusika: ndeipi yandinofanira kutenga?
kudzidziswa » Nhare mbozha » Yakanakisa iPhone pamusika: ndeipi yandinofanira kutenga?
Apple inogadzira inozivikanwa nehupamhi hwemhando yemidziyo yayo, uye vashandisi vazhinji havaregi iyo iPhone inoshanda sisitimu, iOS, kuitsiva neiyo yakanakisa Android iripo munyika.
Kana iwe uri IPhone fatic uchitsvaga iri nani modhi, kana uchingoda kuziva kuti ndevapi vakanaka, pano takatenderedza epamusoro mashanu eApple smartphones kusvika parizvino (kune chaizvo 5 smartphones, nekuti isu takaunganidza mhando dzakasiyana chete. muhukuru, senge iPhone XS uye iPhone XS Max, kupfuura iyo iPhone 8 mutsara).
Iwo akanakisa Apple mafoni
Rondedzero iyi ichagadziridzwa nguva nenguva kuitira kuti ugare uine maPhones akanakisa anoburitswa neApple. Mune dzimwe nyika dzeLatin America, semuenzaniso, sarudzo yakanakisa ndeyekutenga iPhones kubva ku2 kana 3 zvizvarwa zvakapfuura, sezvo zviri nyore maererano nemutengo / bhenefiti.
1. iPhone 11, iPhone 11 Pro uye iPhone 11 Pro Max
MaPhones achangoburwa ndiwo akanyanya kunaka. Mutsara wechi11 waive nenharo, ine kamera seti yaionekwa seyakajairika yekuve neasiri-symmetrical matatu-lens block. Iyi block yakaguma yave chiyero chekushandiswa mune mamwe mafoni anoburitswa gare gare.
Apple iPhone 11, 64GB, Nhema (Yakagadziridzwa)
Ona mutengo paAmazon
Apple iPhone 11 Pro, 256GB, Space Gray (Yakagadziridzwa)
5.8-inch Super Retina XDR OLED kuratidza
Mvura uye guruva kuramba (4 metres kusvika pamaminetsi makumi matatu, IP30)
12 Mpx katatu kamera system ine yakafara angle, Ultra yakafara angle uye telephoto; Husiku modhi, Portrait modhi uye 4K vhidhiyo inosvika makumi matanhatu f/s
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB - Goridhe - Yakavhurwa (Yakagadziridzwa)
6.5-inch Super Retina XDR OLED kuratidza
Yekupedzisira update pa2022-06-28 / Affiliate links / Mifananidzo kubva kuAmazon Product Advertising API
Apple iPhone 11 Pro Max yakatangwa munaGunyana 2019. Yakauya neApple A13 Bionic chipset, Apple GPU, Memory set: 64GB uye 6GB RAM, 256GB uye 6GB RAM, 512GB uye 6GB RAM.
Bhatiri iri 3500 mAh. Chidzitiro che6.5, chine resolution ye1242 x 2688 pixels uye pixel density ye456 ppi, inoshandisa tekinoroji yeOLED ine inodzivirira girazi rinodzivirira.
Makamera aya: 12 MP, f/1.8 + 12 MP, f/2.0, 52 mm (telephoto) 2x optical zoom + 12 MP, f/2.4, 13 mm (ultrawide). 12MP kamera yekumberi, f/2.2.
2. iPhone XS Max uye iPhone XS
Isu tinoisa zvishandiso zviviri munzvimbo imwechete nekuti zvakangofanana, izvo zvinoshandura zvikamu zvishoma zve inch pachiratidziri, asi ngatitaure nezve izvi zvakasiyana.
Apple iPhone XS 64 GB Space Gray (Yakagadziridzwa)
super retina kuratidza; 5,8-inch (diagonal) OLED multi-touch display
Cámara dual de 12.mpx con doble estabilización óptica de imagen y cámara frontal truedepth de 7.mpx: modo retrato, iluminación de retratos,...
face-id; shandisa face id kubhadhara muzvitoro, maapplication nemapeji ewebhu nephone yako
Apple iPhone XS Max 64 GB Goridhe (Yakagadziridzwa)
super retina kuratidza; 6,5-inch (diagonal) OLED multi-touch kuratidza
Iyo inosimudzira yeazvino kuburitswa kweApple pasina mubvunzo ndeye iPhone XS Max. Iyo XS Max ine 6.5-inch Super Retina OLED kuratidzwa, mune 6.2 x 3.1 x 0.3-inch furemu, ine Dolby Vision rutsigiro, iyo ine mavara uye yakapinza-yakapinza.
Midziyo miviri inouya yakashongedzerwa neiyo A12 Bionic chipset ine simba, pamwe nekuve ne4GB ye RAM. Kune zvakare TrueDepth sensor yekukurumidza Facial ID uye Animoji kiinura. Iwo maviri kumashure makamera anopa 2x zoom uye portrait mode.
Iyo iPhone XS yakaenzana neyakatangira iPhone X, ine 5,8-inch skrini, isina kuvhuvhuta se6,5-inch sibling XS Max, asi ichiri yakakura pakuona mavhidhiyo kana kutamba mitambo.
Iyo iPhone XR isarudzo huru kune avo vasingade (kana vasingakwanise) kubhadhara mutengo weiyo iPhone XS, asi vachiri kuda yakakwidziridzwa mudziyo.
Iyi ndiyo Apple "yakachipa" iPhone pakati peaya achangotangwa, pamwe nekuve chishandiso chakanakisa pane rondedzero maererano nehupenyu hwebhatiri uye kuve nemavara akasiyana, akadai sebhuruu, chena, dema, yero, coral uye tsvuku, inopesana neakanyanya. mavara ane mukurumbira. nyoro iPhone XS uye iPhone XS Max.
Apple iPhone XR 64 GB Ichena (Yakagadziridzwa)
6,1-inch (diagonal) yakawanda-inobata LCD skrini ine IPS tekinoroji
Cámara de 12.mpx con estabilización óptica de imagen y cámara frontal truedepth de 7.mpx: modo retrato, iluminación de retratos, control de...
Asi misiyano mikuru pakati peXR neXS/XS Max yakanyanya kunaka, nekuti ine zvimwe zvakakosha zvakafanana: Apple's inokurumidza A12 Bionic chipset uye makamera maviri kumashure.
Muchidimbu, iyo iPhone XR yakachipa, yakawanda ine mavara, ine yakakura 6.1-inch skrini, iyo inogona kuonekwa sepakati pepakati pakati pe iPhone XS uye XS Max. Iyi skrini inokwana vanhu vazhinji, kunyanya avo vasingasimbirire pane OLED skrini.
Iyo iPhone X ndiyo yaive yakanyanya kudhura chishandiso Apple yakamboburitsa, iyo iPhone XS Max isati yaonekwa gore rakatevera. Kusvika kwekupedzisira kwakaratidzawo danho reApple rekumisa kutengesa iyo iPhone X muchitoro chayo chepamutemo, kunyangwe uchigona kuwana mudziyo wekutengesa mune zvimwe zvitoro.
Apple iPhone X 64GB Silver (Yakagadziridzwa)
super retina kuratidza; 5,8-inch (diagonal) OLED multi-touch kuratidza
Doppia fotocamera da 12mp con doppia stabilizzazione ottica dell'immagine (ois) e fotocamera anteriore truedepth da 7mp; modalità ritratto e...
Iine yakanaka, inenge isina furemu dhizaini uye yakawanda yekucheka-kumucheto tekinoroji kupfuura iwe yaunogona kushandisa, iyo iPhone X ichiri sarudzo huru. Zvakanakisa zvinosanganisira kamera hombe ine telephoto lens, inonakidza bhatiri hupenyu, uye Face ID chengetedzo, iyo inokutendera iwe kuvhura smartphone yako uchishandisa chiso chako.
Kana iwe uchida masikirini makuru asi usina zviwanikwa zvakakwana zvekudyara mu iPhone XS Max kana kunyange iPhone XR, sarudzo yakanaka kutenga iPhone 8 Plus. Kana kana iwe ukatoona diki diki skrini, asi chako chinonyanya kukoshesa mutengo pasina kupira kuita, iyo iPhone 8 isarudzo iri nyore.
Apple iPhone 8 64GB Space Gray (Yakagadziridzwa)
Apple iPhone 8 Plus 256GB Space Gray (Yakagadziridzwa)
5,5-inch (diagonal) yakafara LCD Multi-Touch inoratidzira ine IPS tekinoroji
Cámara dual de 12 Mpx con estabilización óptica de imagen, modo Retrato, Iluminación de Retratos y vídeo 4K y Cámara FaceTime HD de 7 Mpx con...
Bata ID. Shandisa Bata ID kubhadhara muzvitoro, maapplication uye mawebhusaiti ne iPhone yako
Ose ari maviri akaburitswa muna 2017, pamwe neiyo iPhone X, uye ndiwo mamodheru ane simba zvakanyanya ane dhizaini yebhatani repamba. Muchokwadi, vashandisi vazhinji vachiri kuwana zviri nyore kufamba ne iPhone ne sensor yemunwe uye bhatani repamba.
Dhizaini iyi inobatsira kukurumidzira zviitiko zvako kuburikidza nekuita zvakawanda, uye iPhone 8 ndeyechokwadi-ruoko rumwe, nekuda kwediki skrini uye maficha ekuwanika. Zvakare, simba rekugadzirisa uye makamera anoramba achikwikwidza.
Dzivisa maPhones aya
iPhone 6S, iPhone SE uye kare
Iyo iPhone 6S/6S Plus uye iPhone SE, uye mamwe ese maPhones pamberi payo, anogona kunge achiwanikwa muzvitoro uye nekutengesa anoshandiswa, asi iwo haachisina kukosha. Ivo havana simba rekugadzirisa rekutevera maapplication uye zvigadziriso zvemakore ari kuuya zvinogutsa. Iwo zvakare haana mvura, uye yavo kamera tekinoroji haina kucheneswa semamodheru matsva.
Sezvo Apple isisiri kuvatengesa, unogona kusarudza kumisa zvigadziriso zvesoftware chero nguva kwemakore anouya. Kunze kwekunge iwe uine mukana wekutenga imwe yeaya ekare modhi nemari shoma, iyo iPhone 7 kana nyowani inonyanya kukosha kuisa mari mairi.
NVIDIA Inowedzera Roller Champions uye 9 Mimwe Mitambo kuGeForce ZVINO
Dzivirira zvimiti zvakachengetwa kuti zvisanyangarika paWhatsApp
Chii chinonzi mobile touch sampling rate?
4 nharembozha dzemitambo ichasvika neSnapdragon 8+ Gen 1
OnePlus inoda kudzokera kumidzi yayo neiyo 10T
Iyo iPhone 14 Max yakanonoka mukugadzirwa uye ingadai iine mashoma stock
Tichafara kunzwa zvaunofunga
FLYROY - Wireless Gaming Headphones - Wireless Gaming Headphones ine maikorofoni - Headset PC PS4 PS5 Xbox - Inogadziriswa uye Padded Gamer Mahedhifoni ane Simba Rinonzwika.
Kurumidza kupihwa kusati kwapera!
Iwo akanakisa mafoni
► Yakanakisa iPhone mafoni
► Mafoni epamusoro ane Android
► Mafoni akanakisa eXiaomi
► Yakanakisa DJI drones
► Yakanakisa kamera drones
► Yakanakisa drones yemumvura
Iwo akanakisa ma routers
► Yakanakisa TP-Link routers
► Yakanakisa Asus routers
► Yakanakisa Netgear routers
► Mahwendefa eKindle akanakisa
► Mahwendefa eAsus akanakisa
► Akanakisa mahwendefa eSony
Kero: Dickman 1441, Buenos Aires, Argentina
Ma social network edu
Mhando Dzese Self Storage Headphones Makamera Network zvishandiso Drones E-vaverengi Kumba uye Kicheni Printers Laptops uye maPC Maikorofoni Smart mafoni Wearables
Gonesa kunyoresa mumadhizaini - zvese